यस्तो ग्रह जहाँ हिराको बर्षा हुन्छ::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
यस्तो ग्रह जहाँ हिराको बर्षा हुन्छ
दुनियाँको सबैभन्दा महँगो पत्थर हीरा । यदि बहुमुल्य हीरा आकाशबाट बर्सियो भने के होला ? यो धर्तीमा आकाशबाट हीरा वर्षिने भन्ने कुरा असम्भव नै छ । तर यो ब्रह्माण्डमा एउटा यस्तो ग्रह छ, जसमा आकाशबाट हीरा बर्सिन्छ ।
सौयमण्डलमै चारवटा यस्ता ग्रह छन् जसलाई ग्यासीय ग्रह पनि भनिन्छ । किनकि, ती ग्रहहरूको अधिकांश हिस्सा ग्यासले बनेको हुन्छ । वरुण पनि ग्यासले बनेको ग्रहमध्ये एक हो । अन्य ग्यासीय ग्रहहरू शनी, अरुण र वृहस्पति हुन् ।
वरुण पृथ्वीबाट सबैभन्दा टाढाको ग्रह हो । यसको सतहको तापक्रम माइनस २ सय डिग्री सेल्सियस रहेको छ । वरुण यस्तो ग्रह पनि हो, जसलाई वैज्ञानिकहरूले सुरुमा नदेखिकनै गणितको अध्ययनका आधारमा पत्ता लगाएका थिए । त्यसपछि मात्र वरुणको खोजी भएको थियो ।
सन् १८४६ को सेप्टेम्बर २३ मा पहिलोपटक यो ग्रहलाई दूरविनबाट देखिएको थियो र त्यसको नाम नेप्च्यून राखियो । जसको अर्थ रोमन धर्मको समुद्र देवता हुन्छ । त्यसलाई संस्कृतमा वरुण भनियो । यसको खगोलशास्त्रीय चिह्न त्रिशूल रहेको छ ।
वरुण ग्रहमा जमेको मिथेन ग्यासको बादल वायुमण्डलमा उड्दछ र त्यहाँ हावाको गति सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहको तुलनामा निकै उच्च हुन्छ । मिथेनको सुपरसोनिक हावा रोक्नका लागि वरुण ग्रहमा कुनै पनि भौगोलिक संरचना छैनन् । त्यसैले त्यहाँ हावाको गति १५ सय माइल प्रतिघण्टा सम्म पुग्दछ ।
वरुण ग्रहको वायुमण्डलमा अन्यन्त घनत्वयुक्त कार्वन भएका कारणले त्यहाँ हीराको वर्षा पनि हुने गर्दछ ।
जब विज्ञान शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई देखाइन शरिरका अंग
यस्ती आमा जसले आफ्नै छोरीलाई देहव्यापारका लागि सुम्पिइन्